Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo maanta ka hadlaysay shirkii cadaalada ee 2021 ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa sheegtay inaysan jirin hay’ad u xilsaaran ilaalinta dastuurka.
Gudoomiye Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in dalka uu soo maray dhibaatooyin kala duwan ilaa inta laga sameynayo dastuur qabyo ah loona baahan yahay in la dhameystiro, shaqadana ay qabaneyso hay’ada gacanta ku haysa oo aan la dhisin.
Xaliima Ismaaciil Ibraahim Yarey ayaa soo jeedisay in dastuurka oo in muddo ah soo jiray la ixtiraamo, laakiin waxay tilmaamtay inay lama huraan ahayd in la dhiso hay’ad mas’uul ah oo ka shaqeysa khilaafaadka.
“DFS waa inay qabataa shir ay yeelanayaan dowlad goboleedyada…
“Dastuurka dalku waa qabyo laakiin waa in la ixtiraamo. Hadii aynaan ilaalin waxa uu leeyahay, horay uma soconeyno. Ma jirto hay’ad ilaalisa dastuurkayaga. Qaab dhismeedka na hagi lahaa oo wax ka qaban lahaa ayaa ma shaqeyn doono haddii aysan Soomaaliya ahayn. ” “Haddii aadan heshiis gaarin, waxaad isticmaali kartaa mindi.” ayay tidhi Xaliimo Yarey.
Xaliimo Yarey oo hadalkeeda sii wadata waxay tiri “Gobolladu Dastuur bay leeyihiin wayna ku dhaqmayaan waana ku saxan yihiin, Dastuur qaran baa jira, ma waxaad u maleyneysaa in labada dastuur meel ay kala aadayaan, haddii aynaan wax isla meel dhigin. meeshaas ciddii inoo ilaalin lahayd aan wada sameysano,. Waxaan ku jirnaa. Waa been, qalad iyo dambi. Oday waa inuu doortaa. Aniga ayaa iska leh kursigan. Ma ahan inuu ii xirnaado. Waxa loo dagaallamayo ma ahan in kursigaas ummadda la dhex dhigo, laakiin waa in gooni laysku laheysiiyo. ”.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa muujinaya Zoom la soo jeediyey in loo sameeyo dastuurka Ombudsman looga saaro meesha looga saaro qabqabsiga halkaas oo aan lahayn meel loo maro iyo cidda awoodday inay xalliso.
axadle 6032 posts
XAQIIQOOYIN: Xiddigaha goolasha ugu dhaqsaha badan